Sinfogeo: Koorsooyinka fog ee GIS - Geofumadas
Ogast, 2009 ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, Baridda CAD / GIS, GvSIG, Microstation-Bentley
Waxaan dhif aheyn inaan aragno dalab ku yaalla aagga GIS sida kan uu bixiyay Sinfogeo. Fursadku ma aha oo keliya waxbarashada, laakiin waa dad khaas ah, kuwaas oo la socon kara ardayda internetka oo dhisto buug tababar.
Sababtoo ah waxay yihiin internetka, waa laga qaadi karaa meel kasta oo adduunka ah, inkasta oo ay sidoo kale ku jiraan qof ahaan (gudaha Spain). Maaha kuwo bilaash ah, waxba kama jiraan noloshaan, laakiin waxaa loo isticmaali karaa dhimista:
Markaad shaqo la'aan tahay,
Inaad noqoto arday
Lacagaha Hay'ada Saddex-Biloodle.
Markaad kooras qaadato Sinfogeo
Kuwani waa koorsooyin qaarkood oo laga heli karo farsamooyinka macluumaadka:
Nidaamka Nidaamka Macluumaadka Juquraafiyeed
Horumarka Sare ee Nidaamka Macluumaadka Juqraafiyeed (GIS)
Koorsada Aasaasiga ah ee Nidaamka Macluumaadka Juqraafiyeed (GIS)
Koorsada Tababarka Macluumaadka Juquraafiyadeed iyo ilaha Macluumaadka
Koorsada Macluumaadka Xirfadaha Deegaanka
Nooc bilaash ah
V8 XM Maadada Microstation
Horumarinta mashaariicda GIS
Maadada Farsamaynta Khariidadda Isdhexgalka
Maareynta Maareynta Mashruuca Tig
Koorsada Horumarinta Barnaamijyada Juqraafiga
Koorsada IDEs iyo Metadata
Ka sokow, waxaa jira noocyo kale oo koorsooyin ku saabsan sayniska kombuyuutarka guud ahaan iyo Software Free. Qaar ka mid ah waxaa ka mid ah taageerida shaqo raadinta iyo kor u qaadista kaydka iyada oo loo marayo isticmaalka software lacag la'aan ah.
Ma aha wax xun haddii aan tixgelinno in ay ka mid tahay AutoCAD, Microstation, ArcGIS, gvSIG, Sextante iyo Geomedia, oo aan naadir u aragno in ay ku jiraan qaabka koobiga ... iyo Isbanishka.
Post Previous«Previous Majaladda 1: Sawirada 3
Post Next GI Joe, oo ka weyn da'da 30Next »